Siidii: Isbaarooyinka Shabeellaha Hoose waa la isugu faanaa!! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siidii: Isbaarooyinka Shabeellaha Hoose waa la isugu faanaa!!
A warsame 22 May 2015 22 May 2015
Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan milateriga Soomaaliya ay isugu faanaan isbaarooyinka la dhigto gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu yiri.
Siidii oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa sheegay in isbaarooyinku si saf ah u yaallaan gobolka Shabeellaha Hoose.
“Taako taako ayay isbaarooyinku u yaallaan laga soo bilaabo KM13 ilaa Wanlaweyn, Afgooye ilaa Marka oo ah caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose” ayuu yiri Gudoomiyaha Shabeellaha Hoose.
“Saraakiisha militarigu waxay isugu faanaan meeqo isbaaro ayaa gobolka Shabeellaha Hoose kuu taalo, maba oga inay yihiin masuuliyiin u taagan inay dalka iyo dadka badbaadiyaan” ayuu yiri, gudoomiye Siidii.
Gudoomiyahaa ayaa caddeeyey in maamulkiisu uusan waxba ka qaban karin isbaarooyinka u yaalla milateriga Sooomaaliya, wuxuuna yiri “Annaga waxba kama qaban karno isbaarooyinkan, qaylo dhaan ayaan marwalba ka soo yeeraysa dadkii deegaanka, waxaanba ka cabsanaynaa in gobolka Shabeellaha Hoose laga wada guuro”.
Wuxuu Siidii sheegay in cabashadooda ay u gudbin doonaa maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaamiyo Sharriix Xasan Sheekh Aadam “Dhibka haatn ka jira Shabeellaha Hoose waa isbaaro, waxaana arrintaas u gudbin doonnaa Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed si ay wax kaga qabtaan” sidaa waxaa yiri Siiddii oo u muuqday inuu ka quustay madaxda dowladda dhexe.
Sawirro: Wasiirka Arrimaha Debadda Qadar oo booqday Muqdisho